Home » Creative Writing » မသန်ပေမဲ့ စွမ်းသူ ၏ အနုပညာ
သူဂျီး ကယ်ပါ။ ဓါတ်ပုံတွေက ပြောင်းပြန်တက်သွားတယ်။ အောက်ဆုံးက အပေါ်ဆုံးဖြစ်နေတယ် ပြန်ပြင်ပေးပါဦး။
ရွာသွားတုန်းက မမရေ။ ကျွန်မကို သင်မလားတဲ့ အချိန်မရလို့ မသင်ခဲ့ရဘူး။ ဘယ်မှာ သင်တာလဲမေးတော့ အမေက ပြောပြတယ် သူတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းထိုင် ဘုန်းဘုန်းက ကျောင်းသားတိုင်းကို သင်ပေးတာတဲ့။ ကျောင်းမှာ အုန်းတောအကြီးကြီးရှိတယ်။ ကျောင်းပိတ်ခါနီးရင် တယောက်တချောင်း ယက်ရသတဲ့ ပြီးရင် အိမ်ပြန်ယူသွားခိုင်းတယ်တဲ့။ တခြား လက်မှုပညာ အတတ်တွေပါ သင်ပေးတာတဲ့။ ဒီ ဦးသောင်းတင်လည်း ဘုန်းဘုန်းလက်ထွက်မို့ တတ်တာလို့ပြောတယ်။ တခြား ဖျာယက်တာ၊ ထရံယက်တာ၊ တောင်းတွေ ခြင်းတွေ၊ ဇကောတွေပါ ယက်တတ်သတဲ့။ အမေက ပြောပြတယ် သူ့ ညီမက အသက်ကြီးလို့ မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုတာကို တားမရလို့ ခွင့်ပြုထားရတာတဲ့လေ။ သူ ယက်တဲ့ တံပျက်စည်းက ခိုင်တယ် အုန်းဆံ အရေအတွက် မခိုပဲ စေတနာပါလို့ ရောင်းကောင်းသတဲ့။
သက်​ငယ်​က နှီးနဲ့ မကွပ်​ကြ​တော့ဘူး​ပေါ့ ။ ​အေး​လေ ပလပ်​စတိတ်​ ​ခေတ်​ဆို​တော့ ။
အဘနီရေ အကွက်ဖော်တဲ့ နှီးက ထန်းလက်ရဲ့ အကြောလေးတွေကို ဖျာထားတာ။ တခြား ဟာနဲ့ မလုပ်ဘူးလား လို့မေးတော့ ပလပ်စတစ်ကြိုးကို ပြမေးတော့ သူက မခိုင်ဘူးတဲ့ ဒါ့ကြောင့် ထန်းလက် အကြောကို ခွာရတာတဲ့ ။
ဗွီဒီပါ ရိုက်လာတယ် ဦးမိုက်။ သူ့ကို ဗွီဒီယိုရိုက်တော့ သဘောကျနေတယ်။
ဘယ်မှာ တွေ့ပြီး မှတ်တမ်းတင်လာတာလဲ မမမှီ။
အမတို့ ရွာမှာ မနောရေ။
သူ့ ဈေးကွက်နဲ့ သူတော့ အလုပ်ဖြစ်သား
သကြားရော သင်ချင်လား။ ရွာကို အလည်ခေါ်မယ်လေ။
အဲ့လိုလူမျိုးတွေ သိပ်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်။ သူတို့ကိုမြင်ရင် စိတ်အားငယ်နေတဲ့ကိုယ်တောင် ပြန်အားတက်နေမိတယ်။ ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူးဆိုတာ ဒီလိုပဲပေါ့။ လဲနေရင် ပြန်ထနိုင်ရမယ်။ အခုလည်း ကျွန်တော်ပြန်ထဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ကျေးဇူးပါ အန်တီမှီ။
လေးစားမိပါတယ် တီမှီ… တစ်ခါတစ်ခါ ကျသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကို လိုက်ကောက်မိချိန်.. သူတို့ကို မြင်မိရင် အလိုလိုရှက်လာတယ်..
အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးတဲ့ ကိုယ်လက် အင်္ဂါပြည့်စုံနေတဲ့ သူတွေ နဲ့ တန်ဖိုး အပုံကြီး ကွာခြားတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
သန်သန်စွမ်းစွမ်း ရှာမစားပဲ မူးရူးနေတဲ့သူတွေပေါတဲ့ခေတ်မှာ…
အစ်မတော်ဂျီး… ဒီပိုစ် တက်လာဖို့ မနေ့ညနေက အချိန် နှစ်နာရီမက…ပေးလိုက်ရတယ်လို့ထင်….
.ရွာကိုလည်း သဂျားထက်အလျင်ဦးအောင် လိုက်လည်ချင်ပါတယ်လို့…
ဒီဦးလေးကြီးအကြောင်းကို ဖတ်နေရင်နဲ့ ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူတယောက်အကြောင်း ခေါင်းထဲရောက်လာတယ်။
လက်မလည်အောင် ရောင်းရတဲ့ ပန်းချီကားတွေ ဖြစ်ခဲ့သတဲ့…
အဲဒီလိုနဲ့ သူရေးချင်တဲ့စာတွေကို မမောမပန်း ဆက်ရေးသွားနိုင်ခဲ့တယ်…တဲ့….
ဟိုးအရင်ကတော့ ဆွံ့အနားမကြား သူ တွေ ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ သင်ပေး တဲ့ ကျောင်းတွေ ရှိတယ်။
အောင်မိုးသူရေ အားမလျှော့ပါနဲ့ အဲ့ဒါ ဘစကျောင်းက သင်ပေးနေတာတွေလို့ တွေးထားလိုက်နော်။
ညီမတော်တွေနဲ့ သူတပြန်ကိုယ်တပြန် ရိုက်ချင်လိုက်တာ….
မောင်နှစ်ယောက်လည်း ရှိသေးတယ်။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်ရင် ပြောပါတယ်။
ဂုဏ်ပြုထိုက်သူ ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ မှီ ရေ….
တကယ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ်အမအိရေ။ သူများ ရိုက်လာတဲ့ ရှု့ခင်းပုံတွေ ရွာထဲမှာ တင်ဦးမယ်။
အန်ကယ်ကြီး ပြောမှ စဉ်းစားမိတယ်။ ပြကြည့်ဖို့တောင် စဉ်းစားမိပုံ မရဘူးထင်တယ်။ အသက်လည်းကြီးပြီမို့ပဲလား မပြောတတ်ဘူး။ နောက်တခေါက်မှ စပ်စုကြည့်ဦးမယ်။
တီမှီ ပြောသလို …
အာတီဒုံဂျီး အနော်မှား ပါပီ.. ဝုတ် ဝုတ်